घरजग्गा बैनाको तमसुक लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु - GalaxyPati
२४ घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसका ३६५ जना नयाँ संक्रमित थपिएका
प्रहरीको दशैँ : मासुभात खाने, ड्युटी गर्ने, ब्यारेकमै टीका अनि शान्ति सुरक्षामा केन्द्रित
हरेक घरमा आ–आफ्नै स्वादअनुसार मासुको परिकार पाक्ने गर्छ ; मटन ग्रेभी बनाउने सहज तरीका
तपाईलाई फेसबुकमा कसले अनफ्रेन्ड गर्यो थाहा छ ? यसरी थाहा पाउन सकिन्छ
घरजग्गा बैनाको तमसुक लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
२०७८ आश्विन २, शनिबार ०७:३३
यदि तपाईंले कुनै पनि घरजग्गा खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने सुरुमा केही रकम बैनावापत बिक्रेतालाई दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी बिक्रेतालाई केही रकम दिएपछि त्यसको बैनाबट्टा कागज (तमसुक) पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ । तमसुक नगरी बैना रकम दिएमा पछि बिक्रेताले जालझेल गरेमा कानुनी लडाईं लड्न पाइँदैन।
बैना कागज लेख्दा निकै रित पु¥याएर लेख्नुपर्ने हुन्छ । एक ठाउँमा मात्र पनि चुकियो भने तमसुक कमजोर बन्छ । भोलि केही गरी बिक्रेताले घरजग्गाको राजिनामा पास गरिदिएन र बैना रकम पनि दिन इन्कार ग¥यो भने कानुनी लडाईमा जानुपर्ने हुन्छ । कानुनी उपचार खोज्न जाँदा तमसुकमा आफु चुक्ने ठाउँ राख्न हुँदैन । त्यसैले चिनजानको भरपर्दो लेखनदासलाई तमसुक लेख्न लगाउँदा राम्रो हुन्छ ।
हामी तपाईंलाई बैनाबट्टाको तमसुक लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुका बारेमा जानकारी गराउँदै छौं ।
बैना रकमको तमसुक नेपाली कागजमा लेखिन्छ । सामन्यतया कानुनी कुराहरु नेपाली कागजमा लेख्नुपर्ने चलन छ । त्यसैले तपाईंले बैना गर्नुभन्दा पहिला ए–फोर साइजको नेपाली कागज किन्नुपर्छ । वा, तपाईंको लेखनदाससँग पनि नेपाली कागज हुन सक्छ ।
बैना कागजमा लेख्दा पनि रित पु¥याउन जरुरी छ । तमसुक लेख्दा माथिपट्टी एक इञ्च, बायाँपट्टी डेढ इञ्च र पुछारमा १ इञ्च छाडेर लेख्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली कागजको एक साइडमा मात्र तमसुक लेख्नुहोला । किनभने, कानुनी कुराहरु जहिले पनि नेपाली कागजको एक साइडमा मात्र लेखिने गरिन्छ । अझ पछिल्लो समय बैना कागजको नमूना नै पाइन्छ । नमूनामा सम्बन्धित विवरण भरेमात्र पुग्छ ।
तमसुक लेख्दा कालो मसिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कालो नउड्ने खालको मसी प्रयोग गरेर लेख्दा बढी सुरक्षित भइन्छ । लेख्दा केरमेट पनि गर्नु हुँदैन । जहाँ केरमेट वा डब्लिएर लेखिन्छ, त्यहाँ हस्ताक्षर वा औंठाछाप लगाउन नभुल्नुहोला ।
तपाईंले कम्प्युटरमा युनिकोडमा तमसुकको नमूना टाइप गरेर नेपाली कागजमा प्रिन्ट गरी हस्ताक्षर वा औंठाछाप पनि लगाउन सकिन्छ ।
बैनाको तमसुक लेख्न सुरु गर्दा ‘लिखितम धनीका नाममा’ भनेर लेख्न सुरु गर्नुपर्छ । र, जग्गा बिक्री गर्न लागेका व्यक्तिको तीन पुस्ता (हजुरबुवा, बुवा र जग्गाधनीको नाम) तमसुकमा लेख्नुपर्ने हुन्छ । अनि जग्गाधनीको स्थायी (नागरिकतामा उल्लेख) ठेगाना र हाल बसिरहेको ठाउँको डिटेल पनि उल्लेख लेख्नुपर्छ ।
जग्गाधनीको तीन पुस्ते र ठेगाना लेखिसकेपछि उसको नागरिकता नम्बर र उसको उमेर उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला ।
सबै कुरा लेखिसकेपछि जग्गाधनीले बिक्री गर्न लागेको जग्गाको स्थान, कित्ता नम्बर, जग्गाको क्षेत्रफल उल्लेख गर्नुपर्छ । जग्गाको क्षेत्रफल पहाडमा भए आना, रोपनी र धेरै जग्गा रहेमा बिघामा उल्लेख गर्ने चलन छ । तराईतिर धुर, कठ्ठा विघामा उल्लेख गर्ने चलन छ । आफ्नो ठाउँमा चलनचल्तीमा भएअनुसार लेख्नुपर्ने हुन्छ ।
जग्गा बिक्री गर्नेको डिटेल लेखिसकेपछि अब किन्ने मान्छेको डिटेल उल्लेख गर्नुपर्छ । खरिदकर्ताको तीन पुस्ता (हजुरबुवा, बुवा र खरिदकर्ता) को नाम, स्थायी ठेगाना (नागरिकतामा उल्लेख), हाल बसिरहेको ठाउँ, नागरिकता नम्बर, उमेर उल्लेख गर्नुपर्छ ।
तमसुकमा खरिद–बिक्री गर्न लागेको जग्गाको प्रतिआना यति मूल्यमा (अंक र अक्षरमा), जग्गाको क्षेत्रफलअनुसार कुल मूल्य (अंक र अक्षरमा) मा घरजग्गा खरिद गर्न फलानो व्यक्ति (खरिदकर्ताको नाम) सहमत भएको भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ ।
तमसुकमा खरिदकर्ताले बैनाबट्टा बापत दिएको रकम अंक र अक्षरमा लेखी बिक्रीकर्ता (घरजग्गाधी)ले बुझिलिएको भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ । तमसुकमा बैना रकम उल्लेख गरेपछि बाँकी दिन रकम पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । यदि बैना रकम चेकबाट दिइएको हो भने चेकमा उल्लेखित नम्बर पनि लेख्दा राम्रो हुन्छ ।
तमसुक लेख्दा साक्षी राख्न भुल्नु हुँदैन ।
तमसुकमा जग्गा कति दिनभित्र पास गर्ने सहमति भएको त्यो पनि उल्लेख गर्न भुल्नु हुँदैन । सामान्यतया बैना गरेको ३५ दिनभित्र जग्गाको कारोबार क्लियर गरी राजिनामा पास गरिदिनुपर्ने चलन छ ।
यो पनि पढ्नुहोस: – के हो अंशबण्डा ? बाबुआमाले छोराछोरीलाई अंश दिन्न भन्न पाउँछन् ?
तमसुकमा उल्लेखित मितीमा जग्गा राजिनामा पास गरि नदिएमा यसै कागजलाई आधार मानि कानुन बमोजिक कारबाही होस् भनेर बिक्रेताको तर्फबाट लेख्नुपर्ने हुन्छ ।
जग्गाधनी र खरिदकर्ताबीच अरु सर्तनामा भएका छन् भने पनि उल्लेख गर्नुपर्छ ।
इतिसम्बत लेखेर जुन दिन कागज गर्दै हुनुन्छ त्यो दिनको मिती स्पष्ट खुल्ने गरी लेख्नुपर्छ ।
पुछारमा जग्गाधनीको नाम लेखेर हस्ताक्षर गर्ने र दायाँ बायाँ औंठाछाप लगाउनुपर्छ ।
हामीले जुन ठाउँबाट तमसुक लेख्न सुरु गरेका छौं, त्यसको बायाँपट्टी जग्गाधनीको दस्ताखत गरेर दायाँ बायाँ औंलाको औंठाछाप लगाउनुपर्छ । जहाँ हामीले अंकहरु लेखेका छौं त्यहाँ पनि ल्याप्चे लगाएमा राम्रो हुन्छ ।
तमसुक कागजको बायाँपट्टि खाली छाडिएको भागमा साक्षीहरुको तीन पुस्ते नाम, उसको स्थाई र अस्थाई ठेगाना, उमेर लगायत लेखेर हस्ताक्षर गराउनुपर्छ । कम्तीमा बैनाबट्टा गर्दा देखेका दुई जनालाई साक्षी राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भन्दा बढी पनि साक्षी राख्नुपर्छ ।
साक्षी बसेका व्यक्तिको नामभन्दा तल्तिर तमसुक लेख्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना लेख्नुपर्छ । कानुन व्यवसायीलाई तमसुक लेख्न लगाउनुभएको छ भने उहाँको नाम, ठेगाना र प्रमाणपत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँको मोबाइल नम्बर पनि उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ । तपाईं आफै वा अरु कोही लेख्दै हुनुहुन्छ भने पनि लेखनदासको नाम,थर र ठेगाना लेख्नुहोस् ।
अन्त्यमा, यो बैनाबट्टा कागज खरिद-बिक्री हुन लागेको जग्गा भएको वडामा गएर तमसुक दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा बढी सुरक्षित मानिन्छ । वडामा दर्ता नगरेको खण्डमा भोलि जालझेल भएको खण्डमा अदालत जाँदा कानुनी रुपमा कमजोर भइन्छ । खरिदकर्ताले बिक्रीकर्तालाई वडामा लगेर त्यहाँको ढड्डामा तमसुकको विवरण उल्लेख गरी हस्ताक्षर र औंठा छाप लगाउन नभुल्नुहोला । साभार नेपाल होम
बैना कागजको नमूना: